Nagu saabsan - Hebei Weijia Birta Mesh Co., Ltd.
Hebei Weijia Birta Mesh Co., Ltd, waa mesh silig ku xeel dheer iyo sheyga badeecadaha ka samaysan madal illaa 1997. Warshadda waxaa oggolaaday ISO 9001-2008. 10 sano dhoofinta waaya aragnimada leh ee adeegyada iibka wanaagsan.Waxaan haynaa ilaa 230 shaqaale shirkad ah, shabag birta mashiinka been abuurka ah, khadka alxanka mesh mesh automatic, mashiinka goynta, mashiinka foorarsiga, mashiinka daloolinta, mashiinka feerka, mashiinka rogista oo samee alxanka robot.
"Badeecad tayo leh, waqtigii loo baahnaa iyo adeegii iibka kadib oo lagu qancay" waa falsafadeena ganacsiga.
“Abuur qiimaha farxadda” waa dhaqanka shirkaddayada.
“Yaraynta saboolnimada oo qof walba noloshiisa ka dhigeysa mid ka sii fiican” waa himiladeenna.
Ka jawaab waqtiga
● 1997 La Aasaasay (Weijia Metal Mesh Factory).
● 2008 Hesho soo dejinta iyo dhoofinta shahaadada (Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd).
● 2012 Hel shahaadada ISO 9001.
● 2015 Qalabka wax soo saarka horumarsan iyo warshad cusub oo jaango'an oo la adeegsaday.
2017 Waxay bilawday inay fiiro gaar ah u yeelato sadaqada, ugu deeqida geedo miro, nooc doofaar, iwm meelaha saboolnimada.
2019 Dhameystir dib u habeynta nidaamka saamileyda.
● 2020 Shahaadada ganacsi ee teknolojiyad sare oo dhameystiran.
* Astaanta Macaamiisha ee alaabada waa la aqbali karaa.
Laga soo bilaabo 1997, Waxaan bilaabaynaa ganacsiga soo saarista shabaggeedii birta, shabaggii frp iyo xayndaabka birta ee alxanka leh ee dhismaha iyo mashaariicda dhismaha. Diirada saar badeecadaha tayada leh iyo bixinta waqtiga, waxaan helnay sharaf badan, sida "Integrity Enterprise", "Wershad Wanaagsan", anaguna waxaan nahay Madaxweyne kuxigeenka "Anping County Wire Mesh Chamber of Commerce".
Shirkaddeenu waxay aaminsan tahay in shaqaaluhu yihiin hantida shirkadda ee qaaliga ah, waxayna muhiimad weyn siineysaa midnimada shaqaalaha, horumarinta caafimaadkooda maskaxeed ee shaqsiyeed, iyo horumarinta xirfadaha mihnadeed. Iyo abaabul dhismo kooxeedyo badan, kulan isdhaafsi hiwaayadeed shaqsiyeed, iyo daryeel xubnaha qoyska shaqaalaha